Qalabayn ilaa nadiif ah oo aad habayso maktabadda music Lugood, effortlessly
Waxaa la joogaa waqtigii Spring (shabahaad) nadiifi maktabadda Lugood iyo abaabulo wax aad la cusboonaysiiyaa aad maktabadda sanadihii la soo dhaafay soo galay. Abaabulka maktabadda Lugood aad si gaar ah faa'iido u dadka doonaya inay isku shaandheyn ku muusikadooda ku salaysan ku sifayn. Marka abaabulay, waxaad awoodi doontaa inaad si aan kala sooc lahayn ku boodaan u dhaxeeya qaybaha kala duwan ama fanaaniinta. Maktabadda An abaabulay waa wax fudud in la sameeyo liiska caadadii play loogu talagalay baahidaada, sida masaafo baaskiil ama fadhiga gym ama socod ka baxay beerta.
Iyadoo sixiddiisa maktabadda waa u suurtoobaan Lugood iyo sidoo, halkaas oo aad leedahay si aad qotomisay tags music gacanta / waxa uu leeyahay dhowr khasaaraha sixiddiisa playlist ka Lugood waa waqti badan ayey ku qaadataa iyo dadaal aad u badan oo ku hadlaya magaca isticmaalaha. Waxaa intaa dheer in marka aad xaalkaa maktabadda on Lugood waxa uu noqonayaa mid aan macquul aheyn si aad u ciyaaro maktabadda this updated on ciyaaryahan kale.
Nasiib wanaag aad u TunesGo halkan waa in loo fududeeyo habka kuugu.
Talaabada 1: fur suuqa kala TunesGo iyo falgali qaybta Library
TunesGo falanqeeyaan doonaa waxyaabaha aad maktabadda (tani laga yaabaa inay qaadato muddo ah ku xidhan xajmiga maktabadda). Marka falanqaynta waa dhamaystiran waxaad ka heli kartaa si deg deg ah in aad maktabadda waa qayb qas iyo u baahan yahay ilaa la nadiifiyo.
Talaabada 2: qalabayn nadiifinta Lugood Library
Riix badhanka nadiifinta, iyo presto! TunesGo daryeeli doona dhammaan macluumaadka la waayay oo ay ku jirto daboolida maqan iyo macluumaadka kale ee metadata maqan. Eeg waa sida ugu fudud ee ABC! Waxa kale oo aad gacanta DEAD kartaa music, bedesho album cover tahay, tirtirto tus, ama meesha laga saaro raad maqan.
> Resource > Lugood > qalabayn nadiifinta iyo abaabulo maktabadda music Lugood